एमाले-माओबादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भए लगत्तै डा. बाबुराम भट्टराईले लेखे यस्तो स्टाटस - pnpkhabar.com
You are at:Home»समाचार»एमाले-माओबादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भए लगत्तै डा. बाबुराम भट्टराईले लेखे यस्तो स्टाटस
एमाले-माओबादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भए लगत्तै डा. बाबुराम भट्टराईले लेखे यस्तो स्टाटस
By रबि धिताल on ३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १३:१८ समाचार
काठमाडौँ, ३ जेठ: बिहिबार दुई कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकापा माओबादीबीच पार्टी एकता भई नयाँ एकीकृत पार्टी नेपाल कमयुनिष्ट पार्टीको घोषणा भएको छ। पार्टी एकताको घोषणा भएको घोषणा भएसंगै नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले दुई प्रमुख ‘कम्युनिष्ट’ घटक एमाले र माओवादी केन्द्रको आपसी विलय समकालीन नेपाली राजनीतिको एउटा निकै महत्वपूर्ण विषय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले सामजिक संजाल फेसबुकमार्फत एउटा लामो स्टाटस नै लेखेर यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
भट्टराईको उक्त स्टाटस यसप्रकार छ:
॰ २०५२ साल अघिदेखि नै राजतन्त्र अन्तर्गत जबजको नाउँमा त्यो बाटो समातीसकेको एमाले र त्यसका विरूद्ध दशवर्षे जनयुद्ध संचालन गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्ने माओवादी वीच अहिले मूलत: एमालेकै राजनीतिक कार्यदिशा र वर्चस्व अन्तर्गत एकीकरण हुनु चाहिं विडम्वनापूर्ण कुरा हो।यसले मुख्यत: जनयुद्ध, मधेस/थारू आन्दोलन र जनजाति आन्दोलनको बलमा प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेसी/समानुपातिक लोकतन्त्रको रक्षा मर्जर पश्चात बनेको पार्टीले कसरी गर्ला भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ! ऐतिहासिक जनयुद्धको दशबर्षसम्म विपरित ध्रुवमा उभिएका र एकअर्कालाई सिध्याउने मनोविज्ञान बोकेका दुइ पक्षका नेताकार्यकर्ताको मिलन कसरी होला अर्को व्यवहारिक समस्या हुनेछ। कि त एमालेजनले जनयुद्धमा नलाग्नु र विरोध गर्नु गलत थियो भन्ने भित्री मनले स्वीकार्नु पर्यो कि प्रचण्ड माओवादीले जनयुद्ध गलत र अपराध थियो भनेर पश्चाताप गर्नुपर्यो! दुवै एकैसाथ सही कसरी हुनसक्छन्?